समाजवादी मोडलको बेलायतको ‘हेल्थकेयर’ - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ अन्तर्वार्ता / विचार ∕ समाजवादी मोडलको बेलायतको ‘हेल्थकेयर’
समाजवादी मोडलको बेलायतको ‘हेल्थकेयर’
डा. बच्चुकैलाश कैनी पीएचडी, एमएचए, एमबीए, एएलबी, बीएड, कर्ट इन क्लिनिकल अडिट । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल क्यान्सर हस्पिटल सोमबार, २०७७ फागुन १० गते, १२:१५ मा प्रकाशित
नेपालका सरकारी अस्पतालहरुमा बिरामीलाई विभिन्न सेवामा छुट दिने व्यवस्था छ । केही सेवाहरु, शैय्याहरु निःशुल्क छन् । तर, पूर्णतयाः निःशुल्क छैन । नेपालका वीर, शिक्षणलगायतका सरकारी अस्पतालहरुमा शुल्क तिर्नुपर्छ । बेलायतमा सरकारी अस्पतालहरुमा सबै नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा पूर्णतयाः निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ । त्यसकारण बेलायत र नेपालको सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा निकै ठूलो अन्तर छ । बेलायतले आफ्ना नागरिकलाई निःशुल्क दिइरहेको स्वास्थ्य सेवा संसारमै उदाहरणीय हो ।
बेलायतमा ६ करोड ८० लाख जनसंख्या छ । यति ठूलो जनसंख्याका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिनु निकै चुनौतीपूर्ण कुरा हो । सरकारले यसका लागि कर त लिन्छ तर करको सदुपयोग पनि उत्कृष्ट तरिकाले गर्छ । बेलायतको सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली नेशनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस)मा झण्डै १३ लाख मानिसहरु काम गर्छन् । देशको समग्र जनसंख्यालाई हेल्थकेयर सेवा दिनका लागि मात्रै यति धेरै मान्छेहरु काम गर्छन् । यो हेल्थ प्रणाली सन् १९४८ मा लेबर पार्टीले सुरु गरेको हो ।
बेलायतका स्वास्थ्य संस्थामार्फत जुन सरकारले सेवा, सुविधा दिएको छ, त्यो सबैका लागि अनुकरणीय छ । हाम्रो देशले पनि त्यो अनुकरण गर्न सक्छ । त्यो मोडलमा आफ्नो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न सक्छौं । त्यसका लागि स्रोत, साधन, म्यानपावर सबै कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । बेलायतमा यहाँको भन्दा काम गर्ने तौर—तरिकाहरु फरक छन् । नेपालमा धेरै फ्याक्टरहरुले कामलाई प्रभावित पारिरहेका हुन्छन्, राजनीतिले पनि हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई असर गरिरहेको हुन्छ ।
बेलायतमा जुनसुकै पार्टीको सरकार बनेपनि कर्मचारीको सरुवा—बढुवा, नियुक्ति आदि इत्यादिमा कुनै असर गर्दैन् । यहाँको अवस्था त्यस्तो छैन । सोर्सफोर्सजस्ता राजनीतिक बाँछिटाहरु स्वास्थ्य संस्थामा प्रत्यक्ष असर गरिरहेका हुन्छन् । यहाँ सरकारमा रहेकाहरु आफन्त, नातागोता, पार्टीका मान्छेहरु भर्ती गरिरहेका हुन्छन् । तर, बेलायतमा कर्मचारीले एउटै कुरामा चिन्ता गर्नुपर्छ—काम गर्ने । काम गर्न सकेमा सफल हुन्छ । त्यहाँ ‘काम गर्न सक्छु कि सक्दिनँ’ भन्ने मात्रै चिन्ता हो । जागिर खान, प्रमोसन पाउन सोर्सफोर्सको आवश्यकता त्यहाँ पर्दैन् ।
नेपालको सरकारी अस्पतालमा काम गरेको म त्यहाँ गएर आफ्नै क्षमताको आधारमा त्यहाँका टप अस्पतालहरुमा काम गरे । त्यहाँ क्षमता देखाएपछि काम गर्न सहज छ । तर, नेपालमा क्षमता भएर मात्र पुग्दैन्, अन्य राजनीतिकलगायतका धेरै कुराहरुले असर गर्छ । कसलाई चाकडी गर्ने, कसलाई रिझाउने, कसलाई पेल्ने, कसलाई माथि ल्याउने, कसलाई तल पार्ने आदि—इत्यादि व्यक्तिगत फ्याक्टरहरुमा धेरै ध्यान पु¥याउनुपर्छ । यो स्थिती नेपालको दुर्भाग्य हो । जुन कुरा लन्डनका अस्पतालहरुमा काम गर्दा गुन्जायस समेत हुँदैन् ।
बेलायतमा प्राइभेट अस्पतालहरु पनि छन् तर एकदमै थोरै छन् । जसको हेल्थ इन्स्युरेन्समा लामो समयसम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छन्, तिनीहरु निजीमा गएर उपचार गर्छन् । बेलायतका सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा एउटा समस्या के छ भने इमर्जेन्सी भयो भने तुरुन्तै उपचार हुन्छ । हेलिकप्टर चार्टरदेखि एम्बुलेन्ससम्म सरकारले तुरुन्तै पठाइदिन्छ । घुँडा, हाडजोर्नी, आँखाको उपचारजस्ता लामो समयपछि पनि गर्न हुने शल्यक्रिया र उपचारजस्ता सेवाका लागि भने निकै लामो समय कुर्नुपर्छ । किनभने, सरकारको लिमिटेड स्रोत—साधन छ । त्यस्तोमा लामो क्युमा बस्नुप¥यो भने मान्छेहरु प्राइभेट अस्पतालहरुमा पनि जान्छन् । बेलायतको तथ्यांकमा ५—७ प्रतिशत मान्छेहरुले मात्रै प्राइभेट स्वास्थ्य सेवा लिएको देखिन्छ ।
नेपालका अर्बान एरियाहरुमा त स्वास्थ्य सेवा भनेकै प्राइभेटजस्तो भइसकेको छ । अधिकांश हुने खानेहरुले त झनै प्राइभेट स्वास्थ्य सेवामा मात्रै लिइरहेका छन् । नेपालमात्रै होइन्, अलि बढी पैसा हुनेहरु भारत, त्यो भन्दा बढी पैसा हुनेहरु सिंगापुर, हङकङ र थाइल्याण्डजस्ता ठाउँहरुमा जान्छन् । त्यो भन्दा बढी पैसा हुनेहरु युरोप, अमेरिका उपचारका लागि जान्छन् । त्यो क्याटागोरी नेपालमा छ ।
बेलायतमा त धनी होस् वा गरिब सबैको रोजाइमा सरकारी स्वास्थ्य सेवा छ । अस्पतालमा सबैका लागि उस्तै बेड र एकै प्रकारको सेवा हुन्छ । रोगको आधारमा मात्रै क्याबिनको व्यवस्था हुन्छ । जस्तो कसैलाई संक्रमणजन्य रोग लागेका उसलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने मात्रै त्यस्ता क्याबिनहरुको प्रयोग गरिन्छ । मान्छेहरुलाई आम्दानी वा हैसियतका आधारमा स्वास्थ्य सेवामा त्यहाँ विभेद छैन । सबैले पाउने स्वास्थ्य सेवा र सुविधा एउटै छ । बेलायतका अस्पतालहरुमा बेडको क्याटागोरी नै छैन । क्याटागोरी छ त रोगका कारणले मात्रै छ । त्यो हाम्रो देशमा छैन । हाम्रो देशका सरकारी र प्राइभेट अस्पताल दुवैतिर बेडको क्याटागोरी छ । सरकारी अस्पतालमा पनि क्याबिनहरु छन् । सरकारी अस्पतालमा बेडको क्याटागोरी हुनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यो कुरा लन्डनका अस्पतालहरुमा छैन् ।
बेलायतका अस्पतालहरुमा स्टाफहरुलाई गर्ने बानी, व्यवहार । उनीहरुलाई दिने तालिम । यी कुराहरुमा एकदमै स्टाफलाई महत्व दिइन्छ । स्टाफको पदपिच्छे फरक व्यवहार पनि त्यहाँ छैन । सबैलाई समान व्यवहार गरिन्छ ।
समाजवादी स्वास्थ्य प्रणाली
बेलायतका नागरिकलाई दुई प्रकारका कर तिर्छन् । एउटा आयकर जुन आम्दानीका आधार तिर्नुपर्छ । दोस्रो, त्यहाँ नेशनल इन्स्युरेन्सका लागि तिर्नुपर्छ । नेशनल इन्स्युरेन्समा प्रत्येक नागरिकको तलबबाट ६ देखि १० प्रतिशतसम्म सरकारले कट्टा गर्छ । यो काम गर्ने मान्छेहरुले मात्रै तिर्छन् ।
नेशनल इन्स्युरेन्सको हिस्सा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा खर्च हुन्छ । यहाँनेर के बुझ्न आवश्यक छ भने जसले कर तिरेको छ, उसले मात्रै स्वास्थ्य सेवा पाउने भन्ने होइन् । कर नै नतिर्ने नागरिकले पनि स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् । तिर्न सक्ने मान्छेहरुबाट कर लिएर, त्यो करको प्रतिशत स्वास्थ्य सेवामा खर्च हुन्छ । त्यसले नै सरकारी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन हुन्छ ।
बेलायतमा अस्पताल गइसकेपछि ‘कसरी उपचार गरौला पैसा छैन ?’ भनेर नेपालमाजस्तो पीर बोकिरहनु पर्दैन् । सबै पैसा राज्यले नै ब्यहोर्छ । त्यसको बिलिङ र हिसाब हुन्छ, अस्पतालहरु एउटा म्यानेजमेन्ट मोडलमा चल्छन् । बेलायतका सरकारी अस्पतालहरुमा पनि आम्दानी खर्चको हिसाब हुन्छ । बिरामी भएर अस्पताल गएपछि कति दिन बेडमा बस्यो, कति वटा एक्सरे, कति वटा टेष्ट गरियो, कुन वार्डमा बसियो सबै कुरा रेकर्ड रहन्छ । अस्पताल बसाइँ, लागेको खर्च सबैको बिलिङ पनि हुन्छ । तर, त्यो बिल सबै सरकारले तिरिदिन्छ । सरकारको अंग नेशनल इन्स्युरेन्सले त्यो खर्च तिरिदिन्छ ।
नेपाल सरकारले सरकारी अस्पतालहरुलाई एकमुष्ठ रकम दिन्छ । अस्पताल कति चलेको छ, बिरामी कति आउँछन् त्यसको मतलब छैन । तर, बेलायतमा सरकारले अस्पतालमा गरेको टेष्टका आधारमा पैसा तिरिदिन्छ । बेलायतमा जतिसक्यो बढी बिरामी ल्याउनुप¥यो, जतिसक्यो राम्रोसँग अस्पतालमा सेवा दिनुप¥यो । त्यही कारण त्यहाँ सरकारी अस्पतालहरु पनि एकदमै प्रभावकारी ढंगबाट चलेका छन् । उनीहरु पनि बिजनेश मोडलमा चुस्तदुरुस्त छन् । त्यहाँ सरकारी अस्पतालले पनि घाटा ब्यहोर्छन्, किनभने त्यहाँ सबै कुराको बिलिङ हुन्छ ।
नेपालमा वीर अस्पतालमा ५० वटा बेड खाली हुन वा भरी मतलब हुन्न । सरकारले अनुदान दिइरहेको छ, राम्रो चलाउनु र नराम्रो चलाउनुमा के मतलब छ र ? बेलायतमा नागरिकको हेल्थकेयर सबै निःशुल्क छ । यतिसम्मकी अस्पतालबाट बिरामी डिस्चार्ज हुँदा घर जाने गाडी छैन् भने सरकारले त्यसको व्यवस्था गरेर पनि पठाइदिन्छ ।
बेलायतमा बिरामीको कुरुवा बस्ने सिष्टम नै हुँदैन् । बिरामीको ध्यान राख्ने, दाह्री काटिदिने, लुगा परिर्वतन गरिदिने, खानाको मेनु ल्याएर सोध्नु, मेनुअनुसार खाना दिने सबै अस्पतालले गर्छ । कुरुवा नहुने भएकाले बिरामीका भिजिटर (आफन्तहरु) आए भने आधा—एक घण्टा बिरामीसँग बिताउँछन् । कुरुवा भनेर अस्पतालमा कोही बस्नु पर्दैन् । अस्पताल छिरेदेखि डिस्चार्ज नभएसम्म बिरामीको सम्पूर्ण जिम्मा अस्पतालको हो । बिरामी डिस्चार्ज भएर घर जाँदा पनि जस्तो कसैको घुडाको शल्यक्रिया भएको छ, घरमा तलमाथि गर्न सक्दैनन् भने घरमा एक्लै हुनुहुन्छ भने सरकारले नै तलको बेडरुम समेत बनाइदिन्छ ।
एउटा नागरिकको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले लिन्छ । नेपालमा धेरै राजनीतिक दलहरुले गफ गर्ने समाजवाद बेलायतमा रियल जीवनमा छ । एकदमै धेरै कमाउने मान्छेले ४५ प्रतिशतसम्म कर तिर्छ । बढी कमाउनेले बढी कर र नेशनल इन्स्युरेन्स तिर्छ । तर, धेरै नेशनल इन्स्युरेन्स तिर्ने र थोरै तिर्नेमा केही पनि फरक छैन, एउटै सुविधा हुन्छ । कोही मान्छे बेरोजगार छ इन्स्युरेन्स तिर्न सक्दैन भने त्यसले पनि अन्य नागरिकझै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउँछ । त्यसकारण वास्तविक समाजवाद बेलायतमा छ । मैले बुझेको समाजवाद, जसमा जनतालाई सुख, सुविस्ता हुन्छ, त्यो बेलायतमा छ । नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास आदि इत्यादि पर्दाका बेला सरकारले हेर्ने खालको समाजवाद त्यहाँ छ ।
निःशुल्क स्वास्थ्य नेपालमा सम्भव छ ?
बेलायतले प्रायक्टिस गरिरहेको हेल्थ प्रणाली नेपालमा लागु गर्न निकै कठिन छ । सन् १९४८ मा लागु भएको यो हेल्थ प्रणाली झण्डै ७५ वर्ष हुन लागिसक्यो । त्यो स्तरमा नेपालको हेल्थकेयर पु¥याउन हामीले निकै मेहनत गर्नुपर्छ । किनभने, धेरै स्रोत साधन र पूर्वाधारहरुको आवश्यकता पर्छ ।
अर्को समस्या नेपालीहरुको बानी निःशुल्क भयो भने त्यसको दुरुपयोग गर्नेछ । जुन बेलायतीहरुमा छैन । निःशुल्क होस् कि नहोस् त्यसमा उनीहरुलाई मतलब छैन । सकेसम्म राज्यको स्रोत साधन खर्च गर्नुहुँदैन भन्ने उनीहरुको मान्यता छ । हामी कहाँ के मान्यता छ भने जुन कुरा निःशुल्क छ, त्यो निःशुल्क पाएपछि धनीले पनि, सक्नेले पनि जतिसक्यो दुरुपयोग गर्ने मान्यता छ । त्यसकारण जुन हाम्रो यस्तो कल्चर पक्ष छ, त्यो पक्षले गर्दा पनि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा नेपालले चलाउन गाह्रो छ ।
अर्को, गुणस्तरीयताको प्रश्न पनि मुख्य हो । नेपालमा जति निःशुल्क भयो त्यति त्यसको गुणस्तरमा सम्झौता गर्न पाइन्छ । हाम्रा जुनसुकै अस्पताल हेर्ने हो भने पनि जुन अस्पताले धेरै शुल्क लिएको छ । नेपालमा उच्च सुविधा दिने र राम्रा चलेका अस्पतालहरुले शुल्क पनि उतिकै राम्रो लिइरहेका छन् । नेपालमा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने बितिकै अस्पतालको मर्मत, सम्भार, सञ्चालन र पूर्वाधार विकासका पक्षमा गुणस्तरीयता कायम गर्न गाह्रो पर्छ । हाइजिन, हेल्थ एण्ड सेफ्टीका कुराहरु पनि लागु गर्न समस्या पर्छ ।
यसको अर्थ नेपालमा सुलभ स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन गाह्रो पनि छैन । अहिले पनि नेपालमा स्वास्थ्य राज्यको ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी कर्मचारीको संख्या स्वास्थ्यमै छ । अहिले सरकारले स्वास्थ्य अझ लगानी बढाइरहेको छ । औषधीहरु निःशुल्क गरिरहेको छ । तालिम दिइरहेको छ । तरपनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु राम्रोसँग मेन्टेन भएका, पूर्वाधार विकास भएका, जनतालाई सुविधा दिने खालका धेरै छैनन् । त्यसकारण नेपालमा राम्रो हेल्थकेयर सिष्टम विकासका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता, कर्मचारीलाई तालिम आवश्यक छ । त्यसबाहेक स्वास्थ्य संरचना बलियो बनाउनका लागि अझ ठूलो मेहनतको खाँचो छ ।
(बेलायतमा लामो समय सरकारी हेल्थकेयर म्यानेजमेन्टमा सक्रिय रहेर हालै नेपाल फर्किएका डा. कैनीसँगको कुराकानीमा आधारित ।)
‘हामी वार्षिक ८० लाख सन्चो उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्छौं’
‘आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो’
‘नेबिको उपभोक्ताको स्वास्थ्यप्रति सदैव सचेत छ’
जनकपुरको स्वास्थ्य : हिजो गुणस्तरीय सेवा, आज चर्को बजारीकरण
प्रदेश २ मा बाल स्वास्थ्यको अवस्था र सुधारका उपाय